WARARKII Ugu Dambeeyay: Maxaa Kasoo Kordhay Kulankii RW Kheyre & Xildhibaanada DFS? | afrikada news online
WARARKII Ugu Dambeeyay: Maxaa Kasoo Kordhay Kulankii RW Kheyre & Xildhibaanada DFS?
Guddoonka Baarlamaanka iyo Guddiyada Joogtada, ayaa maanta si deg deg ahi ugu yeeray Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Xasan Cali Khayre, oo wax laga weydiiyay xiisadda toddobaadkan ku soo korortay siyaasadda dalka.
Xildhibaanada Labada Aqalka ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa aad uga carooday ruwaayad dhextaal ahayd oo Sabtidii lagu soo bandhigay Dugsiga General Kaahiye (School Polizio), xilli munaasabad lagu qabtay uu Madaxweyne Farmaajo kaga dhawaaqay in uu furan yahay Kalfadhiga 2-aad ee Golaha Shacabka. Xildhibaanada ayaa sidoo kale aad uga carooday hadal ka soo yeeray Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, oo habeenkii Sabtida uu ka jeediyay School Polizio, kaasoo ahaa inaanan la aqbali karin mooshin wax lagu burburinayo oo laga keeno Xukuumadda, balse ay soo dhaweynayan mooshin wax sixid ah. Haddii Xildhibaanada ay soo diyaariyan mooshin ka dhan ah Xukuumadda Khayre oo wax burburin ah, ayuu sheegay inay guryahooda ugu taggi doonaan Mudane-yaasha Baarlamaanka.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya oo galabta gaaray Xarunta Villa Hargeisa oo ah Xarunta Guddoonka & Guddiyada Joogtada ee Baarlamaanka, ayaa wax laga weydiiyay riwaayadda lagu soo bandhigay Dugsiga General Kaahiye, waxa ka jira in Xukuumadda ay samaynayso kacdoon ay isaga horkeenayso Xildhibaanada & bulshada iyo aragtidiisa ku aadan hadalkii ka soo yeeray Sheekh Nuur Baaruud Gurxan.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa marka hore iska fogeeyay in uu wax ka ogaa riwaayadda Sabtidii lagu soo bandhigay School Polizio, oo si kulul loogu dhaliilay Xildhibaanada. Nuxurka riwaayadda ayaa in calooshood u shaqaystayaal ay yihiin Xildhibaanada Qaranka. Haddii Ra’iisal Wasaaraha uu iska fogeeyay ku lug lahaanshaha riwaayadan, ayaa waxay eedeyda ku keli noqonaysaa Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliya, General C/xakiin Daahir Saciid (Saacid).
Ra’iisal Wasaare Khayre, ayaa sidoo kale iska fogeeyay wararka leesla dhex marayo ee ku aadan in uu kacdoon dadweyne ka horgayn doono Xildhibaanada Labada Aqal, haddii ay soo diyaariyan mooshin kalsooni kala noqosho xukuumadiisa ah.
Khayre oo ka jawaabayay hadalka lagu haysto Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, ayaa ku andacooday in hadalka wadaadka si khaldan loo fasirtay, isagoo intaa ku daray in Sheekh Gurxan uu qaban doono shir jaraa’id, oo uu ku cadaynayo in la adeegsaday qaybo ka mid ah hadalkiisii, oo intii kalana laga tagey.
Intaasi ka dib, ayay xubnaha Guddiyada Joogtada Baarlamaanka ay Khayre u sheegeen inuu aqbalo in ka Ra’iisal Wasaare ahaan iyo Golihiisa Wasiiradaba lala xisaabtami karo, haddii ay dhaliilo jiraan.
Ilo wareedyo, ayaa sheegaya in Khayre uu garowsan yahay in xukuumadiisa lala xisaabtami karo, maadaama ay qaranka u adeegayso, balse uu diidan yahay in mooshin aan macno ku fadhin laga keeno Xukuumadda uu garwadeenka ka yahay.
Khayre, ayaa codsanaya si qaranka uu u guuleysto in si wadajira loo wada shaqeeyo, oo aan shaqada looga seexan Xukuumadda oo qura, lagana fogaado raadinta ceebaha Villa Somalia.